Abakhenkethi baseMelika bahlala ekhaya njengoko iimeko ze-COVID-19 zinyuka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Abakhenkethi baseMelika bahlala ekhaya njengoko iimeko ze-COVID-19 zinyuka
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngeziganeko ze-COVID-19 ezikhulayo kunye neenkxalabo zokuhamba ezinyukayo njengoko singena ekwindla nasebusika iinyanga, imboni yehotele ikwiqondo elibalulekileyo.
Iipesenti ezingama-69 zabakhenkethi baseMelika kunokwenzeka ukuba bathathe iihambo ezimbalwa.
Iipesenti ezingama-42 zabakhenkethi baseMelika kunokwenzeka ukuba barhoxise iihambo esele zikho.
Iipesenti ezingama-55 zabakhenkethi baseMelika zokuzonwabisa kunokwenzeka ukuba bahlehlise iihambo esele zikho.
Abakhenkethi baseMelika baceba ukubuyisa izicwangciso zokuhamba phakathi kokunyuka kwamatyala e-COVID-19, kunye ne-69% icwangcisa ukuthatha iihambo ezimbalwa, i-55% icwangcisa ukuhlehlisa izicwangciso zokuhamba esele zikhona, kunye ne-42% enokuthi icime izicwangciso esele zikhona ngaphandle kokuhlengahlengisa, ngokutsho Uvavanyo olwenziwe kuzwelonke Umbutho weAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA). Phantse isithathu kwisine (72%) kunokwenzeka ukuba sihambe kuphela kwiindawo ezikumgama wokuqhuba.
Ngelixa ukhenketho ngokwembali luqala ukwehla emva koSuku lwaBasebenzi, luhlala lubalulekile unyaka wonke. Uphando olutsha lubonisa iziphumo ezibi eziqhubekayo zobhubhane ekuhambeni kwaye kugxininisa imfuno yokujoliswa komanyano ekujoliswe kulo, njengeSave Hotel Jobs Act.
Ngaphezulu kwemisebenzi emihlanu ehotele elahlekileyo ngexesha lobhubhane-phantse i-500,000 iyonke-ngekhe ibuye ekupheleni kwalo nyaka. Kubantu abali-10 abaqeshwe ngqo kwipropathi yehotele, iihotele zixhasa imisebenzi eyongezelelweyo engama-26 ekuhlaleni, ukusuka kwiindawo zokutyela nakwiivenkile ukuya kwiinkampani ezibonelela ngeehotele- oko kuthetha ukuba imisebenzi eyongezelelweyo exhaswa phantse ziisigidi esi-1.3 nayo isemngciphekweni.
Uphando lwabantu abadala abangama-2,200 11 lwenziwa ngo-Agasti 12-2021, 1,707. Kwaba bantu, i-78 yabantu, okanye i-2021% yabaphenduli, ngabahambi bezolonwabo-oko kukuthi, abo babonakalise ukuba bangahamba ngezolonwabo ngo-XNUMX. Iziphumo eziphambili phakathi kwabahambi bezolonwabo zibandakanya ezilandelayo:
I-69% inokuthi ithathe uhambo olumbalwa kwaye i-65% inokuthi ithathe uhambo olufutshane
Iipesenti ezingama-42 zinokucima izicwangciso zokuhamba esele zikhona kungekho zicwangciso zokuhlengahlengisa
I-55% inokuthi ihlehlise izicwangciso zokuhamba ezikhoyo kude kube ngumhla olandelayo
Ama-72% kulindeleke ukuba ahambe kuphela kwiindawo anokuqhubela kuzo
Ama-70% kulindeleke ukuba ahambe namaqela amancinci
Ngeziganeko ze-COVID-19 ezikhulayo kunye neenkxalabo zokuhamba ezinyukayo njengoko singena ekwindla nasebusika iinyanga, imboni yehotele ikwiqondo elibalulekileyo. Ngaphandle kokuba Congress izenzo, ukuncitshiswa kokuhamba okunxulumene nobhubhane kuya kuqhubeka nokusongela ubomi bamakhulu amawaka abasebenzi basehotele. Kwisithuba esingaphezulu konyaka, abasebenzi behotele kunye nabanini bamashishini abancinci kwilizwe lonke bebebize iCongress ngesiqabu esingxamisekileyo sesifo. Le datha ibonisa ukuba kutheni ilixesha lokuba iCongress yenze.
U yakhululwa kwakhona I-AHLA Iziphumo zovavanyo zibonisa ukuba abahambi beshishini baphinde bazinciphise izicwangciso zabo zokuhamba phakathi kokunyuka kwamatyala e-COVID-19. Oko kubandakanya u-67% ucwangcisa ukuthatha iihambo ezimbalwa, i-52% inokuthi icime izicwangciso zokuhamba esele zikhona ngaphandle kokuhlengahlengisa, kunye ne-60% yokuceba ukuhlehlisa izicwangciso zokuhamba esele zikhona.
Iihotele lelona candelo lodwa leshishini lokubuk 'iindwendwe kunye nelokuzonwabisa okwangoku ukufumana uncedo ngokuthe ngqo nangona iphakathi kwezona ndawo zibethekileyo. I-US Congress Uyacelwa ukuba apasise umthetho ohlangula imisebenzi emibini oGcinelwe ihotele. Lo mthetho uza kubonelela ngeendlela zokuphila kubasebenzi basehotele, ukubabonelela ngoncedo abaludingayo ukuze baphile de kubuyele kuhambo lwangaphambi kwesifo.
UMongameli weBhodi yezoKhenketho e-Afrika wenza i-GUBA esuka entliziyweni...
NgoSeptemba 30, 2021 kwi-06: 35
Ukuba uziva ugula okanye awuphilanga, nceda uhlale ekhaya. Thetha nogqirha ukuba kukho imfuneko. Ukunciphisa umda ekusasazeni ngakumbi i-coronavirus eCanada, izithintelo zokuhamba zikhona kuyo yonke imingcele yokuwela. Phendula imibuzo embalwa ukufumana.